လစာအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်ဖို့စတင်လိုက်ပါ - MyLasar.com
MyLasar.com မှ၀န်ဆောင်မှုမှအချက်အလက်များသည် အလုပ်လျှောက်ထားသူနှင့် ၀န်ထမ်းများ၏ လစာမျှော်မှန်းချက်နှင့်အသားကျစေမည့် အခကြေးငွေသတ်မှတ်ရန်အကူအညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
လစာတင်ပြချက် သည် ရွေးချယ်ထားသည့်ရာထူးအတွက် တစ်ကြိမ်လစာနှုန်းထားသုံးသပ်ခြင်းအတွက် သင့်လျှော်သည်။ လစာကိရိယာ သည် သင်ရှာဖွေသည့်ရာထူးများစွာအတွက်တစ်ပြိုင်နက်အချက်အလက်များကြည့်နိုင်ရန်သင့်လျှော်ပါသည်။
MyLasar.com ကလစာအချက်အလက်များကို ကုမ္ပဏီ၀န်ထံများထံကတိုက်ရိုက်ကောက်ခံပါသည်။ ၀န်ထမ်းတိုင်းက ၄င်းတို့ရရှိသည့်လစာမျှတမှုရှိမရှိသိရန် မူလရည်ညွန်းချက်ရှိကြပြီး ထောင်ပေါင်းများစွာသောသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်နေ့စဥ်လစာနှိုင်းယှဥ်မှုပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ ယခုနည်းလမ်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အမျိုးမျိုးသောကုမ္ပဏီအသီးသီး၊ သေးငယ်သည့်မိသားစုကုမ္ပဏီမှအစ ကြီးမားသည့်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှ ၀န်ထံများထံကအချက်အလက်များကို ယေဘုယျကျကျရယူထားပါသည်။
မေးခွန်းတွေမှာ ဖြေဆိုသူတွေက လစာပမာဏပိုလွန်ဖြည့်စွက်မှုရှိကြောင်းသေချာအောင်ဘာတွေလုပ်သလဲ?
စစ်တမ်းကောက်ယူသည့်စနစ်ပုံစံက သိသာသည့်လစာပမာဏထည့်သွင်းမှုကို မူလအစကပင်စီစစ်ပါသည်။ ၄င်းတို့ကို ရာထူးနှင့်အလုပ်တည်ရှိရာဒေသကိုလိုက်၍ စီစစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထူးခြားမြင့်မားနေသည့်လစာပမာဏကို စီစစ်သိရှိ၍ နောက်ထပ်တွက်ချက်မှုများတွင်ထည့်သွင်းမသွားပါ။ ယခင်မှတ်တမ်းများအရ ၁၀% သောဖြည့်စွက်မှုများက ယခုစီစစ်မှုကိုကျော်လွှာမသွားနိုင်ကြောင်းဖော်ပြပါသည်။
စစ်တမ်းကောက်ယူမှုပုံစံက ၄င်းအတွက်လည်းပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူက မေးခွန်းကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ဖြေဆိုသည့်အခါ စနစ်ကနောက်ထပ်ဖြည့်စွက်မှုအဖြစ်သိနိုင်၍ ဖြေဆိုမှုတစ်ခုကိုသာ တွက်ချက်မှုတွင်ထည့်သွင်းရန်အလိုလျှောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ယခုကိစ္စအတွက် အထူးအရေးပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ၂၀% သောဖြည့်စွက်ချက်များသည် ယခုအပိုဖြည့်စွက်မှုစီစစ်စနစ်ကပယ်ဖျက်ထားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့စနစ်မှဖော်ပြသည်။ စီစစ်ပြီးသည့်အချက်အလက်ကိုသာ နောက်ဆုံးတွက်ချက်မှုရလဒ်တင်ပြချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြပါသည်။
သင့်ရလဒ်အတွက် "တိုက်ဆိုင်သည့်နမူနာ" တစ်ခုကဘာလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့လစာများကို quantile regression စနစ်ဖြင့်တွက်ချက်၍ ၄င်းစနစ်က ရာထူးများ၊ ဒေသများ၊ ကုမ္ပဏီအရွယ်စားများ၊ ပညာရေး၊ အတွေ့ကြုံနှင့် အသက်တို့ကို အခြေပြုတွက်ချက်ပါသည်။ တွက်ချက်မှုစာရင်းအင်းမော်ဒယ်က အချက်လက်သိုလှောင်မှုစနစ်အတွင်းမှန်ကန်သည့်ဖြည့်စွက်မှု ၂၀ အောက်သာရှိ၍ ဖြေဆိုမှုနည်းသည့်ရာထူးအတွက်ဖြစ်လျှင်လည်း အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်နိုင်သည့်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုရလဒ်ကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ နမူနာအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင်၄င်းအရေအတွက်ထိအချက်လက်များရရှိထားခြင်းမရှိသေးပါက ရလဒ်ကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်မှု မော်ဒယ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းဖော်ထုတ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အချို့သောအရင်းမြစ်များကရသည့် လစာအချက်အလက်များနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါသည်၊ အထူးသဖြင့်အလုပ်ကြော်ငြာများဆီကလစာအချက်အလက်များနှင့်နှိုင်ယှဥ်၍ အခြားသောနည်းလမ်းများဖြင့်ရရှိသည့်လစာအချက်အလက်များကိုလည်းအသုံးပြုနှိုင်းယှဥ်ပါသည်။
လစာစစ်တမ်းက အချက်အလက်များကိုအဆက်မပြတ်ကောက်ခံလျက်ရှိ၍ ၁၀၀-၅၀၀ သောဖြေဆိုသူများကနေ့စဥ်အသစ်ဖြေဆိုထည့်သွင်းလျက်ရှိသည်။ ကွာတာတစ်ခုစီတိုင်းတွင် လစာစီစစ်မှုနှင့် ခန့်မှန်းစနစ်မော်ဒယ်တို့က ပြန်လည်တွက်ချက်မှုပြုလုပ်သည့်အတွက် ၄င်းမှာကျွန်ုပ်တို့လစာတင်ပြချက်များမှန်ကန်မှုရှိစေရန် အမြင့်ဆုံးအချိန်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
လစာစစ်တမ်းတွင်ပါ၀င်သည့်အလုပ်ရာထူးများက အလုပ်စျေးကွက်ကိုအခြေခံထားပြီး ကုမ္ပဏီ၀န်ထမ်းများနှင့် အလုပ်ရှင်များ၏ အကြံပြုချက်များကိုအခြေခံ၍ အစဥ်မွံမံလျက်ရှိပါသည်။ ကိုက်ညီမှုရှိသည့်အချက်အလက်ပမာဏများရရှိနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စီမံပုံစံမှာ နောက်ဆုံးအလုပ်ရာထူးစာရင်းသည် သီးခြားရာထူးတစ်ခုအတွက်လုပ်ကိုင်နေသည့်၀န်ထမ်းအရေအတွက်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အလုပ်စျေးကွက်တွင် အနည်းငယ်သာတွေ့ရနိုင်သည့် ရာထူးများကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်လိုအပ်သည်ရလဒ်ထုတ်ပေးနိုင်ရန် အာမခံချက်မရှိသည့်အတွက် ၄င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။ အလားတူမိမိရာထူးအမည်အားရှာမရသည့် ကိစ္စအတွက် ပို၍ယေဘုယျကျသည့်ရှာဖွေမှုပြုလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ် တိုက်ဆိုင်သည့်ရာထူးနှင့် လစာနှုန်းထားနှိုင်းယှဥ်နိုင်ရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
တစ်ဦးချင်းစီအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်လက်ရှိရာထူးစာရင်းဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရန်။ သင့်ရာထူးကယခုစာရင်းတွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံဆက်သွယ်ရန်.
လစာစစ်တမ်းစီစစ်မှုပုံစံမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို ဖတ်ရှုရန်အတွက် MyLasar.com ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲကိုနှိပ်ပါ.
သင်ရှာဖွေနေတာကိုမတွေ့ဘူးလား? သင့်မေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးပို့မေးပါ [email protected]
လစာကိရိယာကို ၀န်ထမ်းအတွက် remuneration အားအချိန်တိုအတွင်းပြန်လည်သတ်မှတ်လိုသည့် အရာရှိအတွက် အကူအညီပေးနိုင်ရန်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလုပ်ကိုင်စျေးကွက်မှ တိုက်ရိုက်အချက်အလက်များ၏ အကူညီဖြင့် ဗျူဟာချမှတ်သည့်အချိန်တွင် သင့်အားအကောင်းဆုံးအထောက်ကူပြု၍ သင့်တန်ဖိုးရှိသည့်အချိန်ကိုချိုးချန်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
လစာကိရိယာက ပါ၀င်သည့်ရာထူးအားလုံးအတွက်လစာသိရှိနိုင်ရန်အခွင့်လမ်းပေးပါသည်။ သင့်နိုင်ငံနှင့်အခြားနိုင်ငံများက အချက်အလက်များကိုကြည့်နိုင်ရန်အခွင့်ရေးရရှိစေနိုင်မည့် တစ်ခုတည်းသောကိရိယာဖြစ်သ်ည။
အကောင့်တစ်ခုတည်းကပင် မည်သည့်နိုင်ငံကလစာအချက်အလက်ကိုမဆိုကြည့်နိုင်သည်။ နိုင်ငံတစ်ခုထက်ပို၍ ရယူထားခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်စာလစာကိရိယာ အသုံးပြုခွင့်ကို အထူးလျှော့စျေးဖြင့်ရယူနိုင်ပါသည်။
၀န်ထမ်းလစာကို သူ/သူမ ဆောင်ရွက်သည့်တစ်ခုထက်ပိုသောအလုပ်တာ၀န်များအရဖွဲ့စည်းခြင်း။
သင့်၀န်ထမ်းလုပ်ဆောင်သည့်ရာထူးအလိုက်လစာချုံငုံချက်ရယူပါ။ ၄င်းတွင် ဒေသ၊ လုပ်ငန်းကဏ္ဏ၊ အလုပ်အတွေ့ကြုံနှင့် ကုမ္ပဏီအရွယ်စားတို့ကိုလည်းထည့်သွင်းစဥ်းစားမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အချက်အလက်များကို ၂၀၀၇ မှစတင်ကောက်ခံနေခြင်းဖြစ်ပြီး အချက်အလက်ကောက်ခံမှုနည်းပညာကိုလည်းအစဥ်တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်
ဖြေဆိုထားသည့်အချက်အလက်များကို စနစ်တကျစီစစ်မှုများနှင့် အချက်အလက်ရှင်းလင်းချက်များပြုလုပ်ထားပါသည်
အကယ်၍၀န်ထမ်းကမတူညီသည့်ရာထူးများဖြင့်တစ်ခုထက်ပိုသည့်လုပ်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်လျှင်၊ ယခုမော်ကျူးက ရာထူးအားလုံးအတွက်ချုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုစခရင်တစ်ခုတည်းတွင်တစ်ပြိုင်တည်းဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
ကိရိယာတွင် ၀န်ထမ်းများ၏ ငွေကြေးနှင့် ငွေကြေးမဟုတ်သည့် အကျိုးခံစားခွင့်သုံးသပ်ချက်များလည်းထည့်သွင်းထားပါသည်
လွယ်ကူသည့်နည်းလမ်းဖြင့် remuneration အခြေခံကိုသင်ကိုယ်တိုင်အလွယ်တကူတွက်ချက်နိုင်ပါမည်
လိုအပ်ပါက တင်ပြချက်ကိုထုတ်ယူခြင်းသို့မဟုတ် PDF ဖိုင်အမျိုးစားဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်နိုင်သည်
လစာတင်ပြချက်သည် HR ကျွမ်းကျင်သူနှင့် ပရောဖက်ရှင်နယ်များအတွက် ကောင်းမွန်သင့်လျှော်သည့် လစာစနစ်သတ်မှတ်ရန်အတွက် သာမက ၀န်ထမ်းတစ်ဦးအတွက်လည်း အသုံး၀င်သည့်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။
လစာတင်ပြချက်တွင် အလုပ်ရာထူးအတွက် ဒေသ၊ ပညာအရည်အချင်း၊ အလုပ်အတွေ့အကြုံ သို့မဟုတ် အသက်ရွယ် အလိုက် အသားတင်လစာ ကို တစ်ဦးချင်းလစာအစိတ်အပိုင်းများ နှင့် ငွေကြေးမဟုတ်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်များပါ၀င်သည့် စုစုပေါင်းလစာမှ ဖယ်ထုတ်ဖော်ပြထားသည်။
*ဖော်ပြထားသည့်တန်ဖိုးမှာ Sale Tax မပါ၀င်ဘဲ ရွေးချယ်ထားသည့်ရာထူးအတွက်ရှုပ်ထွေးသည့်ဆန်းစစ်မှုများပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Price list MyLasar.com | ကုမ္ပဏီများအတွက်
၀န်ထမ်းများအတွက်လစာစနစ်ချထားမှု နှင့် remuneration ဗျူဟာအတွက် အခြေခံ
၁ နှစ်အတွင်း အလုပ်ရာထူးအရေအတွက် အကန့်သတ်မရှိ
ဒေသ၊ ပညာအရည်အချင်း၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၊ ကုမ္ပဏီအရွယ်အစား၊ အသက်အရွယ် ကိုလိုက်၍ ရာထူးအတွက်လစာတွက်ချက်မှု
စောင့်ကြည့်ထားသည့် ငွေကြေးမဟုတ်သည့်၀န်ဆောင်မှု ၁၆ မျိုးအားပြန်လည်စုစည်းခြင်း
တင်ပြချက်ကို PDF တွင်ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း
အလုပ်အင်တာဗျူး (သို့) လစာပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုအင်တာဗျူး (သို့) ၀န်ထမ်းလစာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက် အခြေခံ
အလုပ် ၁ ခု
ဒေသ၊ ပညာအရည်အချင်း၊ လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံ၊ ကုမ္ပဏီအရွယ်စာ၊ အသက် အလိုက်ရာထူးအတွက်လစာ
ငွေကြေးမဟုတ်သည့် အကြိုးခံစားခွင့် ၁၆ ခုကိုအမျိုးအစားလိုက်အစီအစဥ်
တင်ပြချက် PDF နှင့် link ကိုအီးမေးပို့ရန်
*အဖိုးခများသည် 5% Sale Tax ကိုနုတ်၍ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သီးခြားလိုအပ်ချက်အတွက် အချက်အလက်များရယူလိုပါက [email protected]သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။